Ibido dị mfe. Ndị ahịa UZE nwere ọmalị ahịa na dijitalụ na ndị ọkachamara n ’ụlọ nọ ebe a iji nyere gị aka na mkpọsa gị. I nwekwara ike melite mkpọsa gị ozugbo na UZE Marketplace. Nweta ngwa ahịa UZE site na ndị na-eweta ndị ọzọ 3rd, DSPs na mgbanwe mgbasa ozi. Bido taa n’uzo ohuru nke ime mkpọsa n’ime ụlọ.
Tags: aiAlexander JablovskiAmamịghe echicheakpakanamdemgbasa ozi na-akwụ ụgwọdijitalụ pụọ n'ụlọdoohmobile mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozin'èzí mgbasa oziobodo mara mmasmart obodo mapuzUZE Ahịauze agagharịweather